Ku wadaag aragtidaada ku saabsan wada noolaanshaha bulshada | Somali - Social Cohesion Consultation Hub - Citizen Space
Dowlada waxay rabtaa inay jawaab celin ka hesho kooxo balaaran oo kala duwan iyo dadka shaqada ku jiro si loo fulliyo tallooyinka Guddiga Royal ee Weydiinta ee lagu xoojiyo wada noolaanshaha bulshada. Jawaabtaada iyo soo jeedinada waxay ku wargelin doontaa go’aamada ugu dambeeyo Dowlada.
Macluumaadka shaqada la qabanayo si loo fulliyo tallooyinka kale waxaa laga heli karaa.
Ku qaado sahankan adiga oo riixayo qeyb walba ee jadwalka hoose. Aqri oo ka jawaab su’aalaha ku jiro qeybta kadib riix “continue” si aad ugu laabatid jadwalka si aad u xulatid qeybta xigta ee sahanka. Markii aad dhameysid sahanka, riix badhanka “Finish” ee hoosta jadwalka si aad u gudbisid jawaabahaaga. Uma baahnid inaad ka jawaabtid su’aalaha oo dhan ee aan ku weydiino – waad dooran kartaa inaad ka jawaabtid su’aalaha muhiimka kuu ah.
Sida aad u sameyn kartid gudbin
Waxaa la soo gudbin karaa laga bilaabo 25 Juun illaa 31 Oktoobar 2021
Gudbinta waxay furantahay 25 Juun oo waxay xirmeysaa 31 Oktoobar 2021.
Waxaad ku sameyn kartaa gudbin onleenka ama noo soo qor
Waxaad ku sameyn kartaa gudbinta websaydka MSD. Boggan wuxuu bixiyaa qaabab sahlan oo aad nagu siisid faallo celintaada.
Waxaad sidoo kale noogu soo diri kartaa faallo celintaada i-meel ahaan social_cohesion@msd.govt.nz.
Waxaan sidoo kale soo dhaweynaa gudbinta qoran ee ku socota Wasaarada Hormarinta Bulshada, PO Box 1556, Wellington 6140.
Xil qarinta macluumaadkaaga
Warbixinta aad siisay MSD waxaa loo isticmaalayaa inaa ku wargelino Dowlada wax ku saabsan sida loo xoojiyo wada noolaanshaha bulshada. Jawaabahaaga waxaa lagu faaqidi doonaa mowduucyada, lagu dari warbixin oo lala wadaagi wakaaladaha kale ee Dowlada. MSD ayaa sidoo kale ku daabaci doontaa websaydkooda warbixinta kooban. Labadaba waxaa lagu soo bandhigayaa qaab noocaas ah oo aanan la aqoonsaneyn.
Wasaarada Cadaalada iyo Waaxda Arimaha Gudaha ayaa sidoo kale fulinaya sahqada si au hirgeliyaan tallooyinka kale ee ka imanaayo Guddiga Royal ee Weydiinta. Fadlan ogow in jawaabtaada lala wadaagi karo wakaaladahaas haddii MSD aaminsantahay inay si wanaagsan ugu haboontahay qaadaa dhiga jawaab walba ee aad bixisid ee la xidhiidha wax badan aagooda shaqada. Macluumaad walba ee MSD la wadaagto wakaaladahaas waxaa loogu gudbinayaa iyaga si amni ah. Fadlan noo sheeg haddii aadan rabin in macluumaadkaaga lala wadaago iyaga
Dhammaan macluumaadka aad siisid MSD waa la aruurinayaa, la haynayaa, la isticmaalayaa oo lagu shaacinayaa sida waafaqsan Xeerka Arrimaha gaarka ah 2020. Waxaad xaq u leedahay gelitaanka iyo inaad saxdid macluumaad walba ee MSD hayso ee adiga kugu saabsan.
Fadlan ogow jawaabtaada waxay ku xidhnaan kartaa codsiga ku socda MSD oo wixii macluumaad ah ee waafaqsan Xeerka Macluumaadka Rasmiga ah 1982. Fadlan haku bixin wax macluumaad ah jawaabtaada adiga ama qof kale aqoonsan karo. Fadlan ogow sidoo kale in marka aad gudbiso jawaabtaada MSD sidoo kale waxay diiwaan gelin doontaa cinwaankaaga IP wixii ah jawaabaha baadhida iyo ku jawaabida IT shilalka amniga.
Ku samaynta gudbin luqad kale
Xog ururintan waxaa lagu heli karaa dhowr luqaddood, ay ku jiraan reo Māor iyo Luqadda Dhegoolaha New Zealdna (NZSL) Hadda waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad ku gudbiso luqadda doorashadaada ah.
MSD waxay habbayn doonaan jawaabtaada inuu u turjumo Ingiriisi turjubaan takhasus leh markaas MSD way faaqidi kartaa. Turjubaanku waxa uu dib u soo diri doonaa MSD labbadaba jawaabtaada asalka ah iyo nooca Ingiriisiga ah oo ka dibna waxa uu ka tirtiri doonaa macluumaadkan nidaamkooda. Macluumaadkaaga waxaa la isku waydsaarsan doonaa dhexda MSD iyo turjubaanka si amni ah oo waxaa uu turjubaanku u hayn doonaa si habboon oo waafaqsan Xeerka Sir qarinta 2020.
Hordhaca wasiirka This page has no questions
Asalka hore iyo duruufaha ku xeeran This page has no questions
Wax yar inooga sheeg naftaada
1. Natiijooyinka wada noolaanshaha bulshada – maxaa muhiim kuu ah adiga?
2. Sidee ayaan ku ogaaneynaa haddii aan sameyneyno hormar?
3. Maxay cedeynta ka dhahday dhisida wada noolaanshaha bulshada
4. Qaadida tallaabo lagu xoojinayo wada noolaanshaha bulshada